Mayelana NATHI | I-HEBEI XINTELI CO., LTD
I-Hebei Xinteli ibhizinisi elisezingeni eliphezulu lokungenisa nokuthekelisa, futhi lisuselwe ekuguqulweni kwesakhiwo kwezinkampani ezindala eziphethwe nguhulumeni. UHebei Xinteli wasungulwa ngoSepthemba 2008, futhi uba ngumthumeli ohamba phambili kakhulu esifundazweni sase-Hebei Wezinsimbi Nezimbiwa . Uhla lwemikhiqizo ye-Hebei Xinteli luyizingcingo zocingo (i-hexagonal wire mesh, i-welding wire mesh), uthango lwensimbi (uthango lwensimu, ucingo lwase-holland), imikhiqizo yensimu, imikhiqizo yensimbi nemikhiqizo yehadiwe.Sisebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme njenge-carbon low steel. ingahlinzeka ngemithi eminingi ehlukene yokwelashwa.I-galvanized, i-PVC camera, ihlanganiswe ne-PVC camera.Izimpahla zizohlolwa ngokucophelela ngaphambi kokulethwa, ukuze zinikeze ikhwalithi engcono kakhulu kumakhasimende ethu.
Imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu kwezolimo, ukuvikelwa kwezilwane, izingadi njll. Ububanzi bethu bebhizinisi buhlanganisa nokungenisa nokuthekelisa izinhlobo eziningi zemikhiqizo namasu. Sinyathela isithekelisi esiphezulu esifundazweni sase-Hebei ngemikhiqizo yensimbi nengadi.
Kule minyaka edlule, u-Hebei Xinteli ubelokhu egxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwemikhiqizo emisha. Ngokusebenzisa imisebenzi emisha, uhla lwethu lomkhiqizo belukhuliswa njalo. Inethiwekhi yethu yokuthengisa nayo iqiniswe kakhulu. Imikhiqizo yethu manje imakethwa ngempumelelo ezimakethe zomhlaba wonke ikakhulukazi eYurophu, e-United States of America, eNyakatho Melika, e-Afrika- Njll Ibhizinisi lamanje lika-Hebei Xinteli lithuthuka ngezinyathelo ezingaguquki.
U-Hebei Xinteli uneqembu elihle kakhulu lababambi bamaphupho, eligcwele ukuvelela, ubungqabavu nobuciko. Sikholelwa ukuthi, ngemizamo ehlanganyelwe yawo wonke amalungu, u-Hebei Xinteli ngokuqinisekile uzoba ibhizinisi elihamba phambili embonini yezohwebo lwakwamanye amazwe i-Hebei.
U-Hebei Xinteli uneqembu elihle kakhulu lababambi bamaphupho, eligcwele ukuvelela, ubungqabavu nobuciko.
- U-Hebei Xinteli Co., Ltd.